As of Fri, 05 Jun, 2020 16:40
हामीले मार्क जुकरबर्गले पत्रकार सम्मेलन, सिनेटको सुनुवाइको समयमा पानी पिएको र लगातार पसीना बगाएको देखेका छांै । हालै मात्र प्रविधि पत्रकार स्टिभेनले लेखेको पुस्तक समीक्षामा ३५ वर्षीय सिइओले स्टेजमा जानुअघि मानिसलाई आफ्नो काखीमा आएको पसिना सुकाउनका लागि कर्मचारीका रूपमा मानिस राखेको उल्लेख गरेका छन् ।
के टाउको काटेपछि कुनै प्राणी बाँच्न सक्छ ? तपाईं भन्नुहुन्छ, बिलकुल बाँच्दैन । तर, आजभन्दा ७२ वर्षपहिले अमेरिकामा यस्तै अचम्मको घटना भएको थियो । यहाँ एउटा कुखुरा टाउको काटेको १८ महिनासम्म पनि जीवितै थियो । उक्त समयमा टाउकोबिनाको कुखुरा देखेर मानिस अचम्ममा पर्दै आएका थिए । यसका बारेमा हामी तपाईंलाई बताउँदैछांै । यो कुखुरालाई मि¥याकल माइक नाम दिइएको थियो ।
स्पेसएक्सको भावी चन्द्र यात्राको पहिलो यात्रीका रूपमा रहेका जापानी अर्बपति युसाकु मेइजावाले त्यहाँ जानका लागि महिला साथीको खोजीको विज्ञापन गरेका छन् । उनले साथी मात्रै खोजेको नभई अन्तरिक्ष यात्राका लागि महŒवपूर्ण साथी खोजेको मेइजावाको वेबसाइट प्रवद्र्धन अभियानमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वमा मनकारी मान्छेको कमी छैन । मेहनत गर्ने मानिसलाई सहयोग गर्ने मानिस पनि छन् । यस्तै दानवीर मानिस टेक्सासमा फेला परेका छन् । टेक्सासमा एक ग्राहकले रेस्टुराँको वेटरलाई कार नै उपाहरमा दिएका छन् । जानकारीअनुसार एक वेटर टेक्सासको गेल्भेस्टनको रेस्टुरामा काम गर्छिन्, जसलाई यहाँ खाना खान आएका ग्राहकले नै उपहारमा कार दिएका छन् । वेटरको नाम एड्रियाना एडवर्ड हो । उनी एक अमेरिकी रेस्टुराँमा काम गर्छिन् । उनी रेस्टुराँमा काममा जानका लागि प्रत्येक दिन १४ माइल अर्थात् २२.५ किमि पैदल हिँड्ने गर्छिन् ।
मानिसको विभिन्न किसिमको शोख हुने गर्छ । गिफ्ट, चकलेट तथा पुराना सामग्रीको संकलन त हामीले सुन्दै आएका छौ । तर सिड्नीकी २७ वर्षकी एली हेटपूmलको भिन्न खालको शोख वा लत बसेको छ । उनलाई अन्डरवेयर संकलन गर्ने शोख बसेको छ ।
गिनिज वल्र्ड रिकर्डले हालै मात्र एक जापानी जोडीलाई विश्वकै बढी उमेरको जिवित विवाहित जोडी भएको घोषणा गरेको छ । यो सँगै उनीहरुको विश्वस्तरिय प्रेम कहानी विश्व रिकर्डमा बदलिएको छ ।
एक आइरिस सेलिब्रेटी फोटोग्राफरले आइरिस आलूको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । केबिन एबोसले आफुले अर्गानिक आलूको फोटो एक अज्ञात युरोपेली व्यवसायीलाई बिक्री गरेको पुष्टि पनि गरेका छन् ।
जर्मनीको ल्यूनबाख चिडियाखानाबाट अचम्म लाग्दो खबर सामुन्ने आएको छ । प्रहरीका अनुसार पश्चिमी जर्मनी स्थित एक चिडियाखानाबाट दुईवटा सिंह, दुई बाघ र एउटा चितुवा बार हटाएर भागेका छन् ।
बादरले लुट्यो ३ लाख २० हजार रुपैयाँ
पैसाको प्रयोग मानव जातीले मात्रै प्रयोग गर्छन् । अन्य जनावरलाई यसको कुनै प्रयोग हुदैन । यसको लुटपाट पनि मानिसलेनै गर्छन् । तर भारतको उत्तर प्रदेशमा बादरले १ व्यक्तिको २३ लाख २० हजार रुपैयाले भरिएको झोला लुटेको छ । यो समाचार हाल सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रुपमा भाइरल भइरहेको छ ।
सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ कतै जुँगा पालेर पनि पैसा कमाइन्छ ? सबैको एउटै उत्तर हुनसक्छ पाइँदैन । तर जिल्लाका एक व्यक्ति भने विगत १२ वर्षदेखि जुँगा पालेर पैसा कमाउने गरेका छन् । सिस्ने गाउँपालिका–६ रुकुमकोट निवासी हाल घोराही उपमहानगरपालिका–१५ निवासी कालिबहादुर बुढाथोकीले जुँगा पालेवापत विगत १२ वर्षदेखि मासिक तलब बुभ्mदै आएका छन् ।
आफ्नो सारा सम्पत्ति बादरलाई दिने यी महिला
उत्तर प्रदेशको रायबरेली जिल्लाकी एक महिलाले बादरको मूर्तिको प्राणप्रतिष्ठा गरेर आफ्नो सारा सम्पत्ति बादरको नाममा राखिदिएकि छन् ।
संसारभर बुधबार प्रेमी–प्रेमिकाले माया साटासाट गरी मनाएको प्रेम दिवस चितवनको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा भने भिन्न तरिकाले मनाइएको छ । स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा हात्तीलाई वनभोज खुवाएर प्रेम दिवस मनाइएको हो । सौराहामा अहिले खाना महोत्सव चलिरहेको छ भने सोही क्रममा पर्यटकलाई सेवा दिने हात्तीलाई पनि वनभोज खुवाइएको हो ।
हाल गरिएको एक नयाँ अध्ययनबाट जारी प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०५० सम्ममा सूर्यको तापक्रम अप्रत्याशित रुपले घट्ने देखाएको छ ।